Takumi Internet
2.Takumi Internet ရဲ့ setting ပြောင်းလဲခြင်း
2.1.Login Password ကို ပြောင်းလဲခြင်း
2.2 ကိုယ်ပိုင် domain ကိုအသုံးပြုခြင်း
2.3. Mail/ FTP user Set up ပြုလုပ်ခြင်း
3. Takumi Internet ကိုအသုံးပြုခြင်း
3.1.1. FTP softwareကိုအသုံးပြုခြင်း
3.1.2. File Manager အသုံးပြုပြီး File Uploadပြုလုပ်ခြင်း
3.2. E-mail အသုံးပြုပုံ
4.1.1. FileZillaကို Set Up ပြုလုပ်ပုံ
4.1.2. WinSCPကို Set upပြုလုပ်ခြင်း
4.2. E-mail ကို Setup ပြုလုပ်ခြင်း
4.2.1 Gmail ကို Setup ပြုလုပ်ခြင်း
4.2.2.Window Live Mail ကိုSetup ပြုလုပ်ခြင်း
ဒီ Procedure Manualတွင် Takumi Internet ငှားရမ်းထားသော Domain Setting ၊ User Setting စသည်တို့ကို အသုံးပြုနိုင်တဲ့အထိ အခြေခံကျတဲ့ Setting ပြုလုပ်ပုံများနှင့် Email နှင့် Web Pageများ Upload ပြုလုပ်ပုံစသည့် အသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းများကို ရှင်းပြထားပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Takumi Internet အကြောင်းကို အရိုးရှင်းဆုံးရှင်းပြပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှ ငှားရမ်းပေးသော Server (Takumi Internet) တွင် Rental Server(ငှားရမ်းပေး ထားသော Server)၏ System Setting ပြုလုပ်ခြင်းတွေကို “Webmin”(အောက်တွင် Control Panel ဟုခေါ်ဆိုထားသည်)ဟုခေါ်သောWeb Browser အခြေခံတဲ့ Tool ကိုအသုံးပြုပြီးပြုလုပ်ပါသည်။
●Takumi internet သည် control panel မှာ setting ပြောင်းလဲခြင်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Control Panel ဆိုသည်မှာ ငှားရမ်းတဲ့server(rental server)မှ settingတွေကိုပြုလုပ်တဲ့Toolဖြစ်သည်။ အောက်ပါစာပိုဒ်တွင် Control Panel ကနေSetting အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ပုံကို ရှင်းပြထားပါတယ်။
●Control Panel က Rental Serverကို Setup ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ပထမဦးဆုံး Control Panel Login လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆင့်၁	ကိုယ်အသုံးပြုမယ့် Web Browser ရဲ့ Address Bar မှာ Control Panel URL ကို ထည့်သွင်းလိုက်ရင် Login to Webmin ပေါ်လာတယ်။ ပုံ 2.1 (URL ထည့်သွင်းပုံ ဥပမာ) : (http://takumi001.icraft.ne.jp:5242) အဆင့်2Login to Webmin မှာ customer ရဲ့ Username ကို A row မှာ Password ကို B row မှာထည့်ပြီး Login ကိုနှိပ်ပါ။(ပုံ 2.1)Username နဲ့ Password ၂ခုလုံးမှန်ရင်Control Panel မှာ Login ဝင်သွားပါပြီ။ Login ဝင်ပြီးနောက် Control Panel Top Screen ပုံပေါ်လာပါတယ်။ (ပုံ 2.2)
Login Password ကို မေ့သွားတဲ့အခါ ပြန်လည်ရယူနည်းကို P.4 တွင်ကြည့်ပါ။
ပုံ 2.1 Login to Webmin
●Login ဝင်ပြီးနောက် Password ကို သေချာပေါက်ပြောင်းပေးပါ။
Password ပြောင်းလဲပုံနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး (2.1 Login Password ပြောင်းလဲနည်း) တွင်ကြည့်ပါ။
ပုံ 2.2	Control Panel Top Screen
Control Panel ထဲဝင်တဲ့ Login Password မေ့သွားတဲ့အခါ၊
အထက်ပါURLကို Clickနှိပ်လိုက်လျှင် Mail Form သို့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်၊ အဲ့ဒီ Pageမှာ တောင်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုဖြည့်ပြီး အကြောင်းကြားပါ။ ထို့ပြင် Email : info@icraft.jp ကိုလည်းအကြောင်းကြားပေးပါ။ Mail Form input လုပ်တဲ့example နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး အောက်တွင် ပုံနှင့်တကွရှင်းပြထားပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ နာမည်ကို (Name) row မှာ စာချုပ်ချုပ်တုန်းက Mail Address ကို (Email)row မှာထည့်၊ (Massage)row မှာတော့ Password မေ့သွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ User ID ကို ထည့်သွင်းပါ။(ပုံ 2.3) ထည့်သွင်းပုံ ဥပမာ - Forgot the password	User ID : takumi001 Write code below က rowသည် Confirm ပြုလုပ်တဲ့အခါထည့်တဲ့ code ဖြစ်တဲ့အတွက် (Write code below) ညာဘက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဂဏန်းကိုထည့်သွင်းပါ။(ပုံ 2.3) လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်အကုန်လုံး ထည့်သွင်းပြီးနောက်၊ (Submit) ကိုနှိပ်လိုက်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ သို့မေးလ်ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူကမေးလ်းကို စစ်ပြီးတာနက်တစ်ပြိုင်နက်၊ Password အသစ်ရေးထားတဲ့ Mail ကို စာချုပ်ချုပ် တုန်းကပါတဲ့ လူကြီးမင်းရဲ့ Email သို့ပို့ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Control Panelထဲသို့ Login ဝင်ပြီး Control Panel ရဲ့ Login Password ကို နောက်တစ်ခေါက် setup ပြန်လုပ်ပေးပါ။
※Password နောက်တစ်ခါပြန်Set Up ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းကို (2.1 Login Password ပြောင်းလဲခြင်း) တွင်ကြည့်ပါ၊
ပုံ 2.3　Mail Form (input)
2.1.	Login Password ကို ပြောင်းလဲခြင်း
ဒီစာပိုဒ်တွင်Control Panel ရဲ့ Login Password ကို ပြောင်းလနည်းနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ရှင်းပြပါမည်။
အဆင့် 1	Contorl Panel Top Screen က (Server Configuration )ကို Clickပါ။ (Server Configuration) List ပေါ်လာပါမည်။ အဲ့ဒီ List မှာ (Change Password )ကို Clickပါ။ (ပုံ 2.4) Change Password ပေါ်လာပါမည်။ (ပုံ 2.5)
ပုံ 2.4 Control Panel Top Screen
အဆင့် 2	(New password)ကို A row မှာ (New password again) ကို B row မှာအသီးသီး က	ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အချက်အလက်တွေဖြည့်ပါမည်။ဖြည့်ပြီးတဲ့နောက် (Change Now) Botton ကို Click ပါ။ Password ပြောင်းသွားပါမည်။
ပုံ 2.5 Change Password
Takumi Internet တွင်ကိုယ်ပိုင် Domain ကို တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ Takumi Internet တွင် (30$/Year) နဲ့ ကိုယ်ပိုင်Domain ရရှိအောင် Acquisition agency services ဆောင်ရွက်ပေး နေပါတယ်။ Acquisition agency services ကိုအသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီက ရရှိထားတဲ့ Domain အချက်အလက်တွေကို မေလ်းပို့ပြီး အသိပေး အကြောင်းကြားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မေလ်းကိုအတည်ပြုစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါ Takumi Internet ရဲ့ Control Panel မှာDomain ရဲ့ Setup ကိုပြုလုပ်ပါ။ ထို့ပြင် Customer ကDomain Manage Company မှ Domain ကိုယူပြီးသွားတဲ့အခါ Takumi Internet ရဲ့ Control Panel မှ Domain setting ကိုပြုလုပ်ပါ။ Domain ရဲ့ Setup ပြုလုပ်ပုံနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး အောက်တွင်ရှင်းပြထားပါသည်။
※ရရှိလာတဲ့ Domain မှာ DNS setup လိုအပ်တဲ့အခါ Primary Name Server မှာ Domain Name : icfcsv00.icraft.ne.jp IP Adress : 202.79.6.176 ကို setup ပြုလုပ်ပါ။ ထို့ပြင် Setup နည်းနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး Domain ကို Manageလုပ်နေတဲ့ Domain Management ကုမ္ပဏီ ကိုမေးမြန်း အတည်ပြုပါ။
●ကိုယ်ပိုင် Domain က Set Up လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကိုရှင်းပြပါမယ်။ အဆင့်၁	Control Panel Top Screen ရဲ့ (Server Configuration)ကို Click လုပ်ပါ။(ပုံ 2.6). (Server Configuration) List ပေါ်လာပါမယ်။ အဲ့ဒီList ထဲက (Change Domain Name )ကို Clickလုပ်ပါ။ Change Domain Name ပေါ်လာပါမယ်။ (ပုံ 2.7).
ပုံ 2.6 Control Panel Top Screen
(New Domain Name) ကို A row တွင် ထည့်ပါ။ (နောက်တစ်ကြိမ်မှာ (Takumi-internet.com)တွင် ပြောင်းပါသည်။) Input လုပ်ပြီးနောက်(Rename Now) botton ကို clickလုပ်ပါသည်။(ပုံ 2.7) Domain Name ပြောင်းခြင်းကိုလုပ်ဆောင်တဲ့ စာမျက်နှာကိုပြောင်းသွားပါတယ်(ပုံ 2.8)။ပြောင်းတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးလျှင် Domain Address ပြောင်းသွားတာကို Confirm လုပ်နိုင်ပါတယ်။(ပုံ 2.8 အနီရောင်ဘောင်)
ဒါဆိုလျှင် Domain Name ပြောင်းလဲခြင်းပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ 2.7 Change Domain Name (input)
ပုံ 2.8 Change Domain Name (check)
●ဤစာပိုဒ်တွင် Mail နဲ့ Web Page ကိုလူအများအသုံးပြုနိုင်ပြီး File Upload(FTP, File Manager) ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ user အဖြစ် Set Upပြုလုပ်ပုံနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ရှင်းပြပါမည်။
2.3.1 New Mail Account/FTP user ပေါင်းထည့်ခြင်း
အဆင့်1	Control Panel Top Screen ရဲ့ (Edit User) ကိုClickလုပ်ရပါတယ်။ (ပုံ 2.9) Mail and FTP Users ပေါ်လာပါမယ်။ (ပုံ 2.10)
ပုံ 2.9 Control Panel Top Screen
အဆင့်2( Addauser to this server) ကို Clickလုပ်ပါမယ်။ (ပုံ 2.10) Create User ပေါ်လာပါမယ်။ (ပုံ 2.11)
ပုံ 2.10 Mail and FTP Users
အဆင့် 3	(Email address)သည် A row တွင်၊ (Real Name )သည် B row တွင်၊ (Password) သည်C row တွင်ဖြစ်ပြီး၊ အဲ့ဒီမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်အချက်အလက်တွေ အသီးသီး ဖြည့်ပါမယ်။ (Email Address)မှာဖြည့်လိုက်တဲ့အချက်အလက်က Account List က Account Name ဖြစ်လာပါတယ် အချက်အလက်များဖြည့်ပြီးနောက်( Create) Botton ကို Click လုပ်ပါမယ်။ (ပုံ 2.11) ဒီမှာပဲ Mail Account ပေါင်းထည့်တာပြီးဆုံးပါပြီ။
ပုံ 2.11 Create User (Input)
2.3.2. Mail Account /FTP User အချက်အလက်ကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖျက်ပစ်ခြင်း.
အဆင့် 1 Control Panel Top Screen ရဲ့ (Edit User )ကို Click လုပ်ပါ။ (ပုံ 2.12) Mail and FTP Users ပေါ်လာပါမယ်။ (ပုံ 2.13)
ပုံ 2.12 Control Panel Top Screen
အဆင့် 2	(2.3.1.User အသစ်ပေါင်းထည့်ခြင်း) တွင် ပေါင်းထည့်ခဲ့တဲ့ (takumi-user) ဆိုတဲ့ userအကောင့်ရဲ့ အချက်အလက်ကိုပြောင်းလဲပါမယ်။
List မှာဖော်ပြထားတဲ့ (takumi-user )ကို Click (ပုံ 2.13)
Edit User ပေါ်လာပါမယ်။ (ပုံ 2.14)
ပုံ 2.13 Mail and FTP Users
အဆင့်3(Email Address) သည် A row တွင်၊(Real Name) သည် B rowတွင်ဖြစ်ပြီး၊ ပြောင်းလဲမည့် အချက်အလက်တွေကို အသီးသီးထည့်သွင်းပါမယ်။ (Passowrd) ပြောင်းလဲတဲ့အခါ (Set to…) မှာ အမှန်ခြစ် ကိုထည့်မယ်။ ထို့နောက် Password အသစ်ကို C row မှာ ထည့်သွင်းပါမယ်။ ထည့်သွင်းပြီးနောက် (Save ) botton ကို Clip ပါမယ်။ ( ပုံ 2.14). User ရဲ့ အချက်အလက်ကပြောင်းသွားပါမည်။ ဒီမှာပဲ User အချက်အလက်တွေ ပြောင်းလဲခြင်းပြီးဆုံးပါတယ်။
ပုံ 2.14 Edit User (edit)
အဆင့်4(Mail Account ကိုဖျက်တဲ့အခါ Mail and FTP Users Screen မှာဖျက်ချင်တဲ့ Account မှာ အမှန်ခြစ်ထည့်ပါမယ်။ (ဒီတစ်ကြိမ်မှာ test user ကို ဖျက်ပါမယ်။) (Delete Selected Users) botton ကိုclick ပါမယ်။ (ပုံ 2.15) Delete User မှာရွှေ့ပြီးဖျက်တာကို confirm လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် (Yes Delete Them) ကို Click ပါမယ်။ (ပုံ 2.16) Mail account ရဲ့ အချက်အလက်ကိုဖျက်ခံရပါမည်။ဒီမှာပဲ User information ကိုဖြတ်ခြင်းပြီးဆုံးပါသည်။
ပုံ 2.14 Mail and FTP Users
ပုံ 2.15 Delete Users
ဤစာပိုဒ်တွင် Control Panel တွင် File Manager ကိုအသုံးပြုထားသော Web Page ကို Upload ပြုလုပ်တဲ့ နည်းနှင့် FTP software ကိုအသုံးပြုပုံကိုရှင်းပြပါမည်။
(Contorl Panel ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ) .File Manager ကို (Miyabi Plan), (Kiwami Plan)တွင်ပဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ .File Manager ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ (Java Runtime Enviroment) ကိုကွန်ပြူတာတွင် install လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါသည်။ Install မလုပ်နိုင်လျှင် အောက်ပါ URL တွင်ဝင်ပြီး download ပြုလုပ်ပါ။ [http://java.com/en/]（2014/10/31） .Web page ကိုUpload လုပ်တဲ့အခါ 、～/public_htmlတွင် Upload ပြုလုပ်ပါ။
Web Page ကိုUpload လုပ်တဲ့အခါ Control Panel က File Manager အပြင်FTP softwareကိုလည်း အသုံးပြုပြီးလုပ်နိုင်တယ်။ FTP software ကိုSetUpပြုလုပ်ပုံနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး (4.1 FTP softwareကို SetUpပြုလုပ်ခြင်း)တွင်ကြည့်ပါ။
Serverနှင်FTP အကောင့်တို့ရဲ့ လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကို အောက်ပါဇယားတွင်ကြည့်ရှုပါ။
サーバ 設定内容 設定例
サーバ名（ホスト名) ドメイン名 takumi.internet.com
FTPポート 21 21
ユーザ 設定内容 設定例
アカウント名 ドメインのサブドメイン部 takumi.internet
パスワード 管理者パスワード ********
ホストの初期フォルダ public_html ~/public_html
(FTPsoftware ကိုအသုံးပြုမှုနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး) .WebPage ကို ~/public_html မှာUpload ပြုလုပ်ပါ။ .File Upload ပြုလုပ်ခြင်းကို Server နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးနောက် Drag & Drop ပြုလုပ်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
3.1.2	File Manager အသုံးပြုပြီး File Uploadပြုလုပ်ခြင်း
●FTP software ကိုအသုံးပြုပြီးFile Uploadလုပ်ခြင်းအပြင်၊ Control Panel မှာ File Manager ကိုအသုံးပြုပြီး File Upload ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ File Manager ကိုအသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းပြပါမည်။
အဆင့် 1	Control Panel Top Screen ရဲ့ (Webmin Modules) ကို Clickလုပ်ပါ။ (ပုံ 3.1) (Webmin Modules) Listပေါ်လာပါမည်။List က(File Manager)ကို Clickလုပ်ပါမည်။ Folder Structure Screen ပုံပေါ်လာပါမည်။ (ပုံ 3.2)
အဆင့် 2	(public_html) Folderသို့ Webpage မှာဖော်ပြချင်တဲ့ File တွေကို Upload လုပ်ပါမည်။ ※ (public_html) Folderသည် အများသုံး homepage folder အဖြစ် set upလုပ်ခံရပါမည်။ Home Page ကို အများသုံးလုပ်တဲ့အခါမှာ အထက်ပါ Folderမှာ File ကို Upload လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး(public_html) folderကို Clickလုပ်ပါမည်။ (ပုံ3.2) In Folder Structure Screen (ပုံ 3.3) ပေါ်လာပါမည်။
ပုံ 3.1 Control Panel Top Screen (Webmin Modules)
ပုံ3.2　Folder Structure Screen
အဆင့် 3	(Upload) Botton ကိုClick လုပ်ပါမည်။ (ပုံ 3.3) Upload File ပေါ်လာပါမည်။ (ပုံ 3.4)
ပုံ 3.20 In Folder Structure Screen (Upload)
အဆင့် 4	(File to upload) (A row) Upload လုပ်ချင်တဲ့ File ကိုညွှန်းပါမည်။	(Upload to directory) (B row) Defaultပုံစံနဲ့ Set up လုပ်ထားတဲ့အတွက် ပြောင်းရန်မလိုပါဘူး။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာ (public_html) folderမှာ HTML File (File Name: Hello PHP)ကို Upload လုပ်ပါမည်။ အချက်အလက်အားလုံးကို Confirm လုပ်ပြီးလျှင် အပေါ်က (Upload) Botton ကို Click ပါမည်။ ပုံ(3.4). ဒီမှာပဲ File Upload ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ 3.4 Upload File
အဆင့် 5	နောက်ဆုံးမှာ မှန်တကယ်ပဲ WebPage ကပေါ်နေလားဆိုတာကို စစ်ဆေးပါမည်။ Customer ရဲ့ Web Browser က Address Bar မှာ URL : (http://DomainName/UploadedFileName) ကိုထည့်သွင်းပါမည်။ (ထည့်သွင်းပုံ ဥပမာ) Domain Name က (takumi.internet.com)ဆိုလျှင် (http://takumi.internet.com/Hello_Html.html)လို့ရိုက်ထည့်ပါမည်။ Home Page Screen ပေါ်လာပါမည်။ (ပုံ 3.5) ဒီမှာပဲ File Manager ကိုအသုံးပြုပြီး File Upload ပြုလုပ်မှုပြီးဆုံးပါပြီ။
ပုံ 3.5	Home Page Screen
ဒီစာပိုဒ်မှာ Mail အသုံးပြုဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းပြပါမယ်။ ထို့ပြင် Free Mail Service (ဒီမှာ Gmail set upပြုလုပ်နည်းကိုဖော်ပြထားတယ်) နှင့် Mail software(ဒီမှာ Windows Live Mail Set Upပြုလုပ်နည်းကိုဖော်ပြထားတယ်) တို့ရဲ့ Set Upပြုလုပ်နည်း ကို(4.2 Emailကို Set Up ပြုလုပ်ခြင်း)မှာကြည့်ပါ။ ထို့ပြင် Mail Server နှင့် Mail Account ရဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကို အောက်ပါဇယားတွင် ကြည့်ပါ။
サーバ種別 設定項目 設定内容 設定例
メールアドレス [Name]@[Domain] test@takumi-internet.com
受信側(POP/IMAP) Connection Type POP3/IMAP4/APOP IMAP4
Server name mail.[Domain] mail.takumi-internet.com
Account name [Name].[Domain Name] test.takumi-internet
password User Password ****
Port number POP3,APOP:110,IMAP:143 143
送信側(SMTP) Server name mail.[Domain] mail.takumi-internet.com
Port number 25 or 587 587
●ဤစာပိုဒ်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် E-Mail နဲ့ FTP software ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် Setting ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းပြထားပါတယ်။
4.1. FTP software ကို SetUp ပြုလုပ်ခြင်း
HomePage ကိုလူအများကိုချပြရာမှာ လိုအပ်တဲ့ FTP software Setupပြုလုပ်နည်းကိုရှင်းပြပါမည်။ Serverနှင့် FTP account ရဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်ကို (3.1.2 FTP software ကိုအသုံးပြုခြင်း) တွင်ကြည့်ပါ။
Web Page ကိုလူအများသို့ချပြဖို့အတွက်File Upload Softwareအနေနဲ့ FTP software(FileZilla) ကိုအသုံးပြုပါသည်။ ဒီစာပိုဒ်မှာ FileZilla Set Up ပြုလုပ်ပုံကိုရှင်းပြပါမည်။ FileZilla ကိုအောက်ပါ URLတွင် Downloadပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ [https://filezilla-project.org/]（2014/10/31） အဆင့်၁	(FileZilla)စတင်Runပြီး အပေါ်Menu က(File)မှာ (Site Manager)ကိုClickလုပ်ပါမည်။ (ပုံ4.1) Site Manage စာမျက်နှာပေါ်လာပါမည်။(ပုံ4.2)
အဆင့်၂	(New Site)ကို Clickလုပ်ပါမည်။(ပုံ4.2)
A (Host) row မှာ Domain Name
B (Port) row မှာ 21
C (Protocol) FTP-File Transfer Protocol ကိုရွေး
D (Encryption) Use Plain FTP ကိုရွေး
E (Logon Type) Normal ကိုရွေး
F (User)row မှာ Manage လုပ်တဲ့User
G (Password) row မှာ Manageလုပ်သူ၏ Password ကိုထည့်ပါ။(ပုံ 4.2)
(Connect) ကို Clip လုပ်လျှင်၊ New Site Screen ပေါ်လာပါမည်။(ပုံ 4.3)
ဒီမှာပဲ FileZilla ကိုSetup ပြုလုပ်တာပြီးဆုံးပါသည်။
ပုံ 4.2　Site Manager
ပုံ 4.3　New Site Screen
●ဤစာပိုဒ်တွင် WinSCPကို SetUpပြုလုပ်နည်းကိုရှင်းပြထားပါတယ်။ WinSCPကိုအောက်ပါURL တွင်Downloadပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အဆင့်၁	(WinSCP)ကိုစတင် run ရပါမည်။ A (File Protocol) FTP ကိုရွေး B (Host name) ရဲ့ row တွင် Domain Name C (Port number) 21ကိုရွေး D (User name) row တွင်Manageလုပ်သူ User E (Password) row တွင် Manageပြုလုပ်သူ၏ Passwordကိုထည့်သွင်းပါ။ (Login) Botton ကို Clip လုပ်လျှင်၊ New Site Screen ပေါ်လာပါမည်။ (ပုံ 4.6) ဒီမှာပဲ WinSCPကို Set up ပြုလုပ်ခြင်းပြီးဆုံးပါသည်။
ပုံ 4.5　New Site Screen
ပုံ 4.6　New Site Screen
●ဤစာပိုဒ်တွင် E-mail အသုံးပြုဖို့အတွက် Free Mail Service နဲ့ Mail Software ကို Setup ပြုလုပ်ပုံ ကိုရှင်းပြပါမည်။
Mail Server နှင့်Mail Account အတွက် လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကို (3.2 Emailကိုအသုံးပြုခြင်း) တွင်ကြည့်ပါ။
●Gmail ကို Setup ပြုလုပ်ပုံကို ရှင်းပြပါမည်။
Gmail ကိုအောက်ပါ URL တွင် Access လုပ်ပြိး ဖော်ပြပါ။
※Gmailကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ Google Account မှာ Login လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဆင့်၁	Gmail မှာAccessလုပ်ပြီး Login လုပ်ပါ။ Tool List ပေါ်လာပါမည်။ (အနီရောင်ဘောင်အတွင်း) ကSetting icon ကို Clickလုပ်ပြီး (Settings )ကို Click ပါ။ (ပုံ4.7) Settingsပေါ်လာပါမည်။(ပုံ 4.8)
ပုံ 4.7 Top Screen
အဆင့်၂	(Accounts and Import) ကိုclickလုပ်ပါမည်။ (AddaPOP3 mail account you own)ကို clickလုပ်ပါမည်။(ပုံ 4.8) Addamail account you own ပေါ်လာပါမည်။(ပုံ 4.9)
ပုံ 4.8　Settings
အဆင့်၃	(Email address) row မှာ လူကြီးမင်း၏ set up လုပ်ထားတဲ့ Mail addressကိုထည့်ပါ။ (Next Step) ကိုclickလုပ်ပါမည်။(ပုံ 4.9) Addamail account you own(2)ပေါ်လာပါမည်။(ပုံ 4.10)
ပုံ 4.9 Addamail account you own
အဆင့် ၄	ဒီနေရာမှာ 2.3.1တွင် set up လုပ်ခဲ့တဲ့ User အချက်အလက်တွေကိုအသုံးပြုပါမည်။ A (Username) row တွင် User name, Domain Name B (Password) row တွင် Password C (POP Server) row တွင် Mail. Domain D (Port) rowတွင် 110 ကိုထည့်ပါမည်။ (Add Account) ကို Clickလုပ်ပါမည်။(ပုံ 4.10)
ပုံ 4.10 Addamail account you own(2)
အဆင့်၅	(YES)ကို Clickလုပ်ပါမည်။
(Next Step) ကို Clickလုပ်ပါမည်။( ပုံ4.11)
Add another email address you own ကပေါ်လာပါမည်။(ပုံ 4.12)
ပုံ 4.11 Your mail account has been added.
အဆင့် ၆	(Name) row တွင် စိတ်ကြိုက်နာမည်ထည့််ပါ။
(Next Step) ကိုClickလုပ်ပါ။ (ပုံ 4.12)
Add another email address you own(2)ပေါ်လာပါမည်။ (ပုံ 4.13)
ပုံ 4.12　Add another email address you own
အဆင့် ၇ A (SMTP Server) rowတွင် Mail.Domain
B (Port) row တွင် 587
C (Username) row တွင် Username.Domain
D (Passowrd)row တွင် Password ကိုဖြည့်ပါ။
( Add Account) ကိုClickလုပ်ပါမည်။ (ပုံ 4.13)
Google တွင် Confirm Mail ရောက်လာပါမည်။
Edit email address ပေါ်လာပါမည်။ (ပုံ 4.14)
ပုံ 4.13　Add another email address you own (2)
အဆင့် ၈	Confirmလုပ်တဲ့Mailမှာဖော်ပြထားတဲ့ Code ကိုထည့်သွင်းပါ။ (Verify)ကို Clickလုပ်ပါ။ (ပုံ 4.14) ဒီမှာပဲ Gmail Set Up လုပ်တာပြီးဆုံးပါပြီ။
ပုံ 4.14　Edit email address
4.2.2.	Window Live Mail ကိုSetup ပြုလုပ်ခြင်း
●ဤစာပိုဒ်တွင် Windows Live Mailရဲ့ Setup ပြုလုပ်နည်းကိုရှင်ပြပါမည်။ Window Live Mail ကိုအောက်ပါURL တွင် download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=29224 （2014/10/31） အဆင့်၁	(Accounts) ကိုClick လုပ်ပါမည်။ (Email)ကို Clickလုပ်ပါမည်။
Add your email account ဆိုတဲ့Pageပေါ်လာပါမည်။(ပုံ 4.16)
ပုံ 4.15 Windows Live Mail Top Screen
အဆင့်၂	A (Email address)rowမှာလူကြီးမင်း၏ setup လုပ်ထားတဲ့ Mail Address B (Password) row တွင်လူကြီးမင်း၏ Setupလုပ်ထားတဲ့ Password C (Display name for your sent massages) rowတွင် ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အမည် D( Manually configure server settings) row တွင် check လုပ်ပါမည်။ (Next) ကို Clickလုပ်ပါမည်။ (ပုံ 4.16) Configure Server settingsပေါ်လာပါမည်။ (ပုံ 4.17)
ပုံ 4.16 Add your email accounts
အဆင့် ၃	A (Server type) POP ကိုရွေး
B (Server address) row မှာ Mail.domain
C (Port) rowမှာ 110
D (Authenticate using) Clear text ကိုရွေး
E (Logon user name) row မှာ Usename.domainname
F (Server address) rowမှာ mail.domain
G (Port)row မှာ 587
H (Requires authentication) row မှာ Check လုပ်ပါမည်။
Next ကို Click ပါမည်။ (ပုံ 4.17)
Your email account was added လို့ပေါ်လာပါမည်။ (ပုံ 4.18)
ဒီမှာပဲ Windows Live Mail ကို Set up ပြုလုပ်တာပြီးဆုံးပါပြီ။
ပုံ 4.17　Configure server settings
●အသုံးပြုတဲ့အခါ မရှင်းလင်းတဲ့အချက်တွေရှိလျှင် အောက်ပါ URL ကို Clickပြီး ကျလာတဲ့ Mail Formမှာ သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဖြည့်ပြီး အကြောင်းကြားပါ။ (ပုံ 4.4)
ထို့ပြင် Email : info@icraft.jp ကိုအကြောင်းကြားပါ။
Mail Formမှာထည့်သွင်းတဲ့ ဥပမာအနေနဲ့အောက်တွင် ရှင်းပြထားသောပုံနှင့်စာကိုကြည့်ပါ။
လူကြီးမင်း၏နာမည်ကို (Name) row၊ စာချုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်က Mail addressကို (Email) row တွင်၊ Message rowမှာ အကြောင်းအရာစသည်တို့ကိုရေးထည့်ပါ။ (ပုံ 4.1) အားလုံးရေးထည့်ပြီးနောက် (Submit) bottonကိုနှိပ်လျှင် ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီသို့ပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူက စစ်ဆေးပြီးတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် မေးမြန်းထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဖြေဆိုထားတဲ့ mail ပို့ပြီးအကြောင်းပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ 5.1　Mail Form (input)